Beeraleyda Jaadka Kenya ayaa laga yaabaa inay waqti dheer sugaan inta laga qaadayo xanibaada… – Hagaag.com
Beeraleyda Jaadka Kenya ayaa laga yaabaa inay waqti dheer sugaan inta laga qaadayo xanibaada…
Posted on 8 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Beeraleyda iyo ganacsatada Jaadka Miraa ee dalka Kenya ayaa laga yaabaa inay sugaan waqti dheer inta laga qaadayo xanibaada Qaadka ay u dhoofin jireen Soomaaliya. Waxay arrintan ku qaadan kartaa tan iyo xilliga doorashada kadib oo dib loo furi doono howlihii diblumaasiyadeed.
Sida laga soo xigtay madaxweyne ku xigeenka dalka Keyna William Ruto, Kenya hoos ayay u dhigtay wadahadalada ay kula jirto Soomaaliya tan iyo inta hogaamiyaasheeda ay diirada saarayaan doorashooyinka la qorsheeyay dabayaaqada sanadka 2020 iyo horaanta sanadka 2021.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya oo la hadlay Weru TV, ayaa sheegay in Soomaaliya ay u mamnuucday Qaadka Miirowga si uu qeyb uga noqdo gorgortanka muranka badda ee labada dal.
“Waxaa jiray xoogaa isfaham la’aan ah oo kadhex jirtay Kenya iyo Soomaaliya arinta badda. Waxay joojiyeen Qaadkeenna. Waxaan ku jirnaa wadahadallo aan ku kala saarayno labada arrimood laakiin doorashada ayaa gaabis ku ah hawsha. Waxaan rajeyneynaa markey doorashadu dhammaato, waxaan awoodi doonnaa inaan soo gabagabeyno wadahadallada ku saabsan dib u soo celinta ganacsiga, ”ayuu yiri Dr Ruto.
Warbaahinta Kenya ayaa qortay in bishii la soo dhaafay Soomaaliya ay soo saartay liiska shan dalab oo ay tahay inay Kenya fuliso ka hor inta aysan dib u bilaabin ganacsiga miirowga.